Serasera momba ny pesta : Nomena vaovao marim-pototra ireo masoivoho vahiny -
AccueilRaharaham-pirenenaSerasera momba ny pesta : Nomena vaovao marim-pototra ireo masoivoho vahiny
12/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manoloana ny fihanaky ny valanaretina pesta eto Madagasikara, izay efa noraisin’ny fitondram-panjakana ny fifehezana izany ankehitriny, maro ireo vaovao mampisafotofoto izay miely any ivelany tato ho ato.
Noho izay indrindra, nampiantso ireo masoivoho vahiny miasa sy monina eto Madagasikara ny mpikambana eo anivon’ny governemanta, izay tarihin’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier, omaly, teny amin’ny Lapa-panjakana Mahazoarivo.
Araka izany, nisy ny dinidinika nifanaovan’ny praiminisitra miaraka amin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta tamin’ireo masoivoho vahiny tamin’izany. Nifototra tamin’ny fanaparitahana ny vaovao mikasika ny fihanaky ny valanaretina pesta ny fihaonana tamin’izany. Araka izany, nanambara ny teo anivon’ny governemanta, tamin’ny alalan’ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy, Henry Rabary-Njaka, fa ny governemanta irery ihany no afaka manome vaovao marina mikasika ny fivoaran’ny valanaretina pesta eto Madagasikara. « Tsy hitsahatra ny hanome vaovao marina mikasika ny aretina pesta eto Madagasikara ireo masoivoho vahiny miasa sy monina eto amintsika ny governemanta. Izany no natao mba tsy hampiteraka tahotra sy mba hialana amin’ny vaovao tsy marina miely amin’ireo haino aman-jery vahiny”, hoy ny minisitra Henry Rabary-Njaka.
Raha ny marina mantsy, niparitaka tamina haino aman-jery vahiny maromaro ny vaovao momba ny pesta eto Madagasikara. Mifamahofaho be ihany anefa ireo vaovao niparitaka tany ivelany, izay tsy voamarina ny ankamaroany. Araka izany, nandray fepetra ny teo anivon’ny governemanta malagasy tamin’ny fifampidinihina tamin’ireo masoivoho vahiny.
Tetsy ankilany, nanambara kosa ireo masoivoho vahiny fa hampita sy hanome vaovao amin’ny endriny marina sy mangarahara mahakasika ny pesta amin’ny firenena niaviany sy naniraka azy ireo tsirairay avy hiasa eto Madagasikara.
Hita taratra amin’izany ny fandraisan’andraikitry ny Fitondram-panjakana manoloana ny fanelezana vaovao tsy marina, ary koa ny fiadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina pesta izay tsy mitsahatra.